Temperature avo manohitra Fiberglass Fabric mifono amin'ny PTFE Properties - China Jiangsu KingRay Composite
Temperature avo manohitra Fiberglass Fabric mifono amin'ny PTFE Properties
PTFE mifono lamba
Ny fototra lamba dia vita amin'ny kofehy fitaratra na Kevlar kofehy, ary waterproofed tamin'ny roa-misy rindrina PTFE fampiharana.
NON-ADHESIVE TEFLON mifono lamba
Malagasy toetra matoatoa va no samy hafa ny mainty, izay tsy mamaritra ny hatsaran'ny
Tena ADHESIVE TEFLON mifono lamba (amin'ny fiarovana mavo Nampandamòka an'izany sy ny silicone adhesive)
matevina habe amin'ny fifanarahana
Sakan'ny PTFE mifono lamba - ny fitsipika sakany dia 1,000mm (midadasika kokoa amin'ny fifanarahana, fa max. 2,600mm).
Length ny PTFE mifono lamba - ny fitsipika halavan'ny horonan-taratasy iray no 50m ho an'ny tsy adhesive teflon lamba sy ny 30m (na 33m) ho tena adhesive teflon lamba (intsony ny fifanarahana).
Thicknesses rehetra ny tsy adhesive sy ny tena dikan-adhesive ny fitsipika tsara sy ny sakan'ny 1000mm ary ny sasany thicknesses ny antistatic sy Premium dikan-foana eo amin'ny tahiry.
Ny lamba amidy "ao amin'ny metatra". Afaka ihany koa ny manapaka azy ho endrika araka ny faniriany.
Properties ny PTFE mifono lamba:
mafana avy amin'ny fahamarinan-toerana -150 ° C ho + 260 ° C
tsy adhesiveness, manovaova
fanoherana ny infrared, microwave sy ny taratra manimba taratra
hery hatramin'ny 140kg / sm
amin'ny lafiny fahamarinan-toerana
sliding kely indrindra coefficient
fanoherana ny ankamaroan'ny indostria simika, thinners sy ny ranoka mandevon-javatra
Previous: Tohero ny hafanana Non Hazokely PTFE Antistatic Fabric
Manaraka: Antistatic Heat mahatohitra PTFE mifono Fabric